Umntu okufutshane nam unengxaki - kuza kuthiwani ke ngoku? - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Social Issues XHO163
Ngaba uyasela kakhulu nyhani okanye ndizihlupha ngento engekhoyo
Libala okomzuzwana okokuba usela kangakanani na okanye kangaphi uze uphendule le mibuzo ilandelayo:
Okokuba uthe ewe kuyo nayiphi na ingongoma kwezi zingentla ungaphantse uqiniseke okokuba umntu unengxaki yokusela engenakuziphelela ngokunokwayo.
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqonde malunga nengxaki yokusela.
Akukhathaliseki nokuba umntu uthini na, akungonobangela wokusela kwakhe. Okokuba ubungekho ebeza kufumana sizathu simbi sokusela.
Musa ukuyikholelwa into yokuba umntu uza kusela kancinci nakuba nitshatile, ningejene, nihlala kunye okanye naso nasiphi na esinye isizathu. Nakuba nje nitshatile, ningejene okanye ninabantwana kuza kuba nzima ngakumbi okokuba wenze nto ngale meko.
Izoyikiso, iinyembezi nezithembiso zakho azisayi kukunqanda ukusela. Umntu angazisola okomzuzwana, kodwa loo nto imnika esona sizathu sakha savakala sokuphinda asele.
Kuyanceda ukubuchitha okanye ukubufihla utywala bomntu? Kambe akuncedi. Umntu isiselo esinxilisayo uza kusithenga asongeze kuphela ngemali engekhoyo kakade.
Okokuba ufuna le meko ijike, kufuneka ufune uncedo. Cela uncedo kumfundisi wakho, ugqirha okanye uNontlalontle kwelona sebe likufutshane leSANCA (WC).
Yenza idinga noNontlalontle kwelona sebe likufutshane leSANCA (WC) okanye neSebe lezeNtlalontle okanye iBadisa. Kunzima kakhulu ukwenza into ngale meko uwedwa. UNontlalontle uza kukunceda wenze icebo eliza kuyilungela ngokukodwa imeko yakho.
Okokuba usoloko ubethwa okanye uthotywa isidima ungaya eofisini kamantyi wakho ufumane uxwebhu oluthintela ezi zenzo ngokusemthethweni. Xa unoxwebhu olu njalo aze umntu akudlakathise okanye adlakathise abantwana bakho kwakhona, looo umntu angabanjwa ngaMapolisa aze avelelwe okwethutyana.
Okokuba unako, cinga ngokuya kuhlala nabahlobo okanye izihlobo de lo mntu enze into ebonisa inguqu koko kusela kwakhe. Amaxelegu ngokwasekuseleni ayakhawuleza ukubona okokuba kukho umntu okhoyo wokulungisa ingxaki edalwa kukusela kwawo. Xa nje soloko kukho abantu abalungisa iingxaki zomntu oselayo, soze babamkele ubutyala ngokubhekisele kwizenzo zabo.
Joyina umbutho onjenge- AL-Anon okanye i-CAD. La maqela anabantu abafana nawe abasokole ngale ngxaki inye yokuba nomntu omthandayo olikhoboka lesiselo esinxilisayo. Baza kuba nako ukukuxhasa yaye akusayi kuphinda uzive ulilolo.
Luluphi uncedo lokunyangwa olukhoyo?
Ngokuncedwa nguwe uNontlalontle uza kuqala ajonge okokuba le ngxaki yokusela sele ihambe kangakanani na.
Uncedo luza kubiza malini? Asinamali ininzi. UNontlalontle uza kukuqinisekisela ngale meko. Imibutho emininzi kukho imali ayibizayo. Kodwa umntu imali ayihlawulayo ixhomekeke emvuzweni wakhe. KwaSANCA (WC) siza kusoloko siyifumana indlela yokunceda abo bangenamali. ISebe lezeNtlalontle lineenkonzo zokunyanga ezingezininzanga nezisimahla. Kumaxa amaninzi xa umntu ezicelela uncedo ngokunokwakhe umqeshi uyamnceda umqeshwa ngeendleko.
Okokuba uNontlalontle unoluvo oluthi umntu ufuna unceda olungalalisi sibhedlela uza kwenza amalungiselelo nombutho ofana neSANCA (WC). Olu hlobo lokunyanga luza kuthetha ukuthi umntu kuza kufuneka ahambe iintlanganiswana zamaqela eziza kumnceda ahlale enganxilanga.
Umntu uza kufumana ukukhathalelwa ngokusebenzisa amayeza, ukutya kakuhle yaye uza kuhamba iintlanganiswana eziza kumnceda aphile ngaphandle kwesiselo esinxilisayo.
Akuba ekhululwe apho ebenyangelwa khona umntu kufuneka ahambe iintlanganiso zamaqela kwiindawo ezifana ne-Alcoholics Anonymous okanye i-CAD (Christian Action for Independence). Ibaluleke kakhulu le nto kuba ngaphandle kwayo inkoliso yabantu abaselayo baza kubuya umva baphinde benze laa nto indala yokusela.
Okokuba ngumlingane wakho ongundofanaye ofumana unyango kukwabalulekile okokuba ujoyine amaqela ngenxa yomlingane wakho.
Uncedo ndilufumana phi?
SANCA (WC) Bellville ……………… 021 945 4080
BADISA …………………………………. 021 957 7130
Christian Action for Dependence ……….. 021 930 4472
Thetha nomfundisi wakho
ISebe lezeNtlalontle ……………………..….0800 220 250
Amapolisa ……………………………… 0860 010 111
Isixeko saseKapa …………………………..0800 435 748